China Automatic Professional Tube Laser Cutting Machine mpanamboatra sy mpamatsy | Guo Hong
Masinina fanapahana laser Tube ho azy
Ny milina fanapahana laser fantsom-pahaizana mandeha ho azy dia fitaovana fanapahana haingam-pandeha avo lenta sy avo lenta ary azo itokisana izay manambatra ny fibaikoana ny solosaina, ny famindrana mekanika ary ny fanapahana hafanana. Ny interface tsara amin'ny milina tsara dia mahatonga ny fandidiana ho mora sy tsotra kokoa, ary afaka manapaka ny banga isan-karazany haingana sy marina. Izy io dia mandray endrika maodely iray, izay haingana hapetraka ary mora mihetsika.
Masinina fanesorana laser fantsom-pahaizana mandeha ho azy
Automatique feno, karama ambany noho ny asa
Mora ny miasa, fiarovana mahery fiarovana, fampisehoana marin-toerana sy azo itokisana.
Chucks Pneumatika Double Double Professional
Fahombiazana avo lenta: tsindrio ny bokotra iray hikarakarana, fanamafisana mandeha ho azy, in-3 haingana kokoa noho ny chuck electrique; Hafa tsara: hery fametahana lehibe sy tsy miovaova, tsy misy fantsom-piterahana, azo antoka ny fanapahana;
Fahamarinana avo lenta: ny fanohanana fantsom-pahaizana manokana dia afaka misoroka ny fantson-tsolika sy ny fanovana, marina sy mateza;
Loha fanapahana natao manokana ho an'ny fanapahana fantsona
Ny lohan'ny fanapahana marani-tsaina manokana dia mahatonga ny karazana fantsom-pandrefesana fantsona ho mora kokoa;
Noho ny famolavolana tendrony dia mora ny misoroka ny fifandonana rehefa manapaka fantsona maranitra;
Fihetsiketsehana collimation sy fiarovana vaovao, fiarovana tsara kokoa ho an'ireo singa fototra.
Famahanana mandeha ho azy
Fantaro ny fisarahan'ny fitaovana marani-tsaina, ny famahanana ary ny docking tsy misy fangarony amin'ny milina fanapahana laser fibre taorian'ny fametrahana ireo fantsom-p tuboana ao anaty fitaovana famahanana ary alao antoka fa fantsona iray ihany no aterina amin'ny sandry mampita isaky ny mandeha.
Fanalana mandeha ho azy
Ny vokatra vita dia arotsaka ho ao anaty fitoeram-bokatra, fanohanana roa fanampiny misy fanampiana fanampiny fantsona maharitra.
Famolavolana fandriana plastika
Ny fandriana dia mandray rafitra fananganana mombamomba ny tranonkala misokatra izay efa voamarina sy voamarina tamin'ny famakafakana CAE. Ny fanaingoana ny mari-pana avo lenta sy ny fahanterana voajanahary dia ampiasaina mba hanafoanana ny adin-tsaina, hisorohana ny fiovana, hampihena ny hovitrovitra, ary hiantohana ny fahatapahan'ny fanapahana
Modely milina GHJG-F6020T
Fametahana savaivon'ny fantsom-boribory 20-200mm
Fametahana savaivony ny fantsom-by 20 * 20mm-150 * 150mm
Max. Haingam-pandeha 100m / min
Hafainganana haingana 1G
Hery azo ampiharina 1000W-60000W
1. Afaka manapaka ny tsipika sy ny lavaka misy savaivony samihafa avy amin'ny torolàlana samihafa amin'ny fantsona, ary mihaona amin'ny tohatry ny fihaonam-baravarana afovoany sy tsy afovoany ho an'ny axis an'ny sampana sy ny fantsona lehibe.
2. Afaka manapaka ny tsipika miampita amin'ny faran'ny fantson'ny sampana, ary mihaona ny marimaritra iraisana sy afovoan'ny zoro afovoany ho an'ny axe an'ny sampana sy ny fantsona.
3. Afaka manapaka ny fizarana mirona amin'ny faran'ny fantsona.
4. Afaka manapaka ny fantsom-boaloboka mifanelanelana amin'ny fantsona boribory lehibe.
5. Afaka manapaka ny bevel zoro bevel ambonin'ny
6. Afaka manapaka lavaka toradroa, lavaka miendrika andilana ary lavaka boribory eo amin'ny fantsona.
7. Afaka manapaka ny fantsona.
8. Afaka manapaka ny sary rehetra eto ambonin'ny fantsom-povoahana.
Teo aloha: Tube Fiber Laser Cutting Machine
Manaraka: Masinina lasitra laser-tanana
Masinina fanapahana laser 2kw
milina fanapahana fantsona mandeha ho azy
milina fanodinana laser fantsom-pahaizana mandeha ho azy
vidin'ny milina laser cnc laser
fitaovana fanapahana laser fibre
milina fanapahana laser fibre optika
milina fanapahana laser fantsom-by
milina fanapahana fantsona toradroa
Takelaka tokana sy takelaka laser manapaka ma ...
Masinina fanapahana laser Tube mavesatra